January 4, 2019 – Bharosa Media
तरकारीको नर्सरी व्यवस्थापन तथा नर्सरी ब्याड बनाउने प्रविधि
January 4, 2019	Leaveacomment 334 Views
काली प्रसाद पाण्डे परिचय ः कृषकहरुले तरकारी उपभोग गर्नको लागि तथा व्यावशायिक रुपमा आम्दानी गर्नको लागि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । कतिपय जिल्लाहरुको ठाउँ ठाउँमा तरकारी खेती गर्न नजानेर आम्दानी गर्न त परै जाओस, तरकारी खान नपाएर जीवन विताएर वसेका हुन्छन् । यस्तो ठाउँहरुमा तरकारी उत्पादन गराउन सकेमा कृषकहरुको स्वास्थमा सुधार हँदै जाने र आम्दानीको वाटो खुल्दै जाने हुन्छ ...
कसरी बढाउने पढाइमा रुची ?
January 4, 2019	Leaveacomment 216 Views
– सुमन तिमल्सिना अचेल धेरै साथिको गुनासो हुन्छ–किन हो मलाई त पढ्र्न मन लाग्दैन ? मत परीक्षा आएपछि मात्रै पढ्ने हो । अव त पढ्छु भन्यो दिमागमा बसे पो । धेरैको मनमा यस्तै कुराहरु खेलिरहेको हुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरुले यसो हुनुका केहि कारण पत्ता लगाएका छन् ।ती कारण बुझेर अघि बढ्न सके पढाई झर्काे लाग्दो हुदैन । परीक्षामा हाउगुजि बन्दैन । ...
नौ देशमा कतारको भिसा सेन्टर
January 4, 2019	Leaveacomment 148 Views
काठमाडौँ । दिनहुँ मानिसहरु श्रमका लागि विदेशिने क्रममा भर्ना प्रक्रियामै ठगी, करारपत्रमै कम्पनीको छली, तलबबिनै काम अनि अनुपयुक्त बासस्थान, निःशुल्क भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट रकम असुल्ने गरेको भन्ने कतार जाने श्रमिकहरुको गुनासो रहेको छ । यस्ता प्रवृत्ति रोक्न कतार सरकारले आफ्नै म्यानपावर कम्पनी खोलेको छ । कतारी उद्योग तथा व्यापार मन्त्री अली विन अहमिद अल कुवारीको निर्णयमा ५८ मिलियन ...
गाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु आवश्यक छैन: डा. बाबुराम
January 4, 2019	Leaveacomment 142 Views
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नबनाउन भनेको तर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले नमानकेका कारण आफूहरु मान्न तयार भएको बताए । संयोजक डा. भट्टराईले अन्तरिम संविधान बनाउँदै गर्दा क्रान्तिकारीहरुको लागि राजतन्त्र फ्याक्ने र गणतन्त्र ल्याउने कुरा बताएका छन् । परम्परागत रुपमा कसैले त्यही जनावरलाई काटेर खाने र कसैले पुजा गर्ने भएका कारण अप्ठ्यारो आएको बताउँदै ...
भ्रष्टाचारको आरोपमा कंसाकारलाई मोसो
January 4, 2019	Leaveacomment 133 Views
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को युवा संगठनले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मोसो दलेको छ । कंसाकारलाई उनकै कार्यकक्षमै पुगेर मोसो दलेको केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेलले बताए । क्रान्तिकारी माओवादी निकट युवा लिग नेपालका ...
नेपाल टेलिकमको २१ अर्ब घोटाला, अधिकारीलाई महाप्रबन्धक बनाउने तयारी
January 4, 2019	Leaveacomment 191 Views
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवामा २१ अर्ब रुपैयाँमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन पहिलादेखि मिलाएको रहस्य खुलेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकममा महाप्रबन्धक नियुक्ती खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनिए तापनि उनले डिल्लीराम अधिकारीलाई महाप्रबन्धक बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । टेलिकममा महाप्रबन्धकका लागि ११ जनाको निवेदन परेको छ । तीमध्ये नौ जना ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए । ...